UNESCO World Heritage Sites Na Europe | Save A Train
Home > Travel Europe > UNESCO World Heritage Sites Na Europe
Europe bụ ukwuu UNESCO World Heritage saịtị na-adọta ọtụtụ nde njem nleta. E nwere ihe a dịgasị iche iche nke nlegharị anya ile - site na ihe owuwu ihe owuwu ụlọ na nke ọdịbendị rue n'oké ebube nke Ochie Ochie.
Na ọtụtụ ebe ịhọrọ site na, ọ pụrụ isi ike maka a njem na-eme ka a mkpebi banyere ebe njedebe. Iji nyere gị aka ịhọrọ nke UNESCO World Heritage saịtị na Europe na-ahụ ụzọ, anyi agwakọtala ndepụta aha:
UNESCO World Heritage Sites na France
Ụfọdụ n'ime ihe ndị kasị dị ịrịba ama UNESCO World Heritage saịtị na France na-agụnye ihe ebube dị ka ndị Versailles. Ọ bụ ụlọ ndị eze a ma ama ma ama France. Ọzọ ebe mara mma banyere bụ Abbey Church of Saint-Savin-sur-Gartempe. Ọ bụ a Romanesque uka site usen 9 narị afọ na Poitou, ọhụrụ Aquitaine.
Maka njem na-n'anya na-ahụ okpukpe ihe, e nwekwara ndị na Chartres Cathedral. Onye Rom a Katidral Katọlik malitere na narị afọ nke 13, na i nwere ike ịhụ na ọ na ndịda ọdịda anyanwụ nke Paris. N'ikpeazụ, enwere Mont Saint-Michel na ya n'ọnụ mmiri. Ọ bụ agwaetiti na-emeri na e wusiri ike na-akpa si 8 AD, na a ebe obibi ndị mọnk dị ka ya isi Ọdịdị.
UNESCO World Heritage Sites na Italy
Italy jupụtara UNESCO World Heritage saịtị, otú anyị ga-kwuru banyere ụfọdụ n'ime ndị kasị mma-mara ndị. Nkwụsị mbụ anyị bụ mgbe ochie ebe nke Pompei, Herculaneum, na Torre Annunziata. Ha uru dabeere n'eziokwu na ha bụ ndị oge ochie na-foduru nke obodo na e liri mgbawa nke Mt. Vesuvius gbawara na 79 AD. E nwekwara Castel del Monte, a nnukwu ụlọ mkpakọrịta nwoke na nwaanyị si narị afọ nke 13. Ebe ọ mixes na mmetụta nke European Cistercian Gothic na Muslim ije, ọ bụ a na-adọrọ mmasị anya.
Ọzọkwa, Ọzọkwa Italy bụ n'ụlọ ka Piazza del Duomo na Pisa, ama leaning elu. N'ikpeazụ, e nwere ndị akụkọ ihe mere eme emmepe nke abụọ na isi obodo, Florence na Rome. na Florence, owuwu-anọchi anya Renaissance ije style na a ga-ahụ. Ị gaghị agbaghara ndị Uffizi, Nnukwu ụlọ ụka Senti nke Santa Croce, na Florence Cathedral. na Rome, i nwere inyocha center nke Alaeze Ukwu Rom na Catholic ụwa na a buru ibu ọnụ ọgụgụ nke ncheta na omenala na saịtị.
Germany bụ mba nke castles, Cathedrals, na ndị ọzọ na ịtụnanya UNESCO World Heritage saịtị. Katidral Aachen bụ ebe olili nke Charlemagne na usoro izizi mbụ e wuru na ya kemgbe oge ochie. The akara ama ama na Germany bụ katidral ọzọ, a onye na Cologne. O were ọtụtụ narị afọ na-ewu malite 1248. Ọzọkwa, n'ókèala nke Alaeze Ukwu Rom na-kwesịrị a nleta. Onye ọ bụla kwesịrị ịhụ Hadrian Wall na Antonine Wall, nke e wuru na 122 AD na 142 AD, karị.
Ịgagharị Upper Middle Rhine Valley na-aga na-agaghị echefu echefu ahụmahụ. Mpaghara a bụ n'ụlọ ka a nnukwu ọnụ ọgụgụ castles na akụkọ ihe mere eme na obodo nta. N'ikpeazụ, e Wurzburg Obibi na Court Gardens na Obibi Square. Ọ bụ otu n'ime ndị kasị obí eze na Germany, a nnukwu ihe atụ nke Rococo style.
Ndị a bụ nanị ole na ole n'ime ọtụtụ ihe magburu onwe UNESCO World Heritage saịtị na Europe. Na anyị aro, ị gaghị na-ezighị ezi ahazi gị na njem. Ị nwere ike iru a ebe ụgbọ okporo ígwè si dị iche iche isi European obodo.
Njikere inyocha ihe Europe nwere na-enye? Kwadebe gị nleta ọwọrọiso UNESCO World Heritage na saịtị na akwụkwọ gị gbaa ụgbọ okporo ígwè taa!
Ị chọrọ Embed anyị blog post jidesie gị na saịtị, ị nwere ike ma buru anyị na foto na ederede na dị nnọọ enye anyị n'aka na a njikọ a blog post, ma ọ bụ na ị pịa ebe a:https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Funesco-world-heritage-sites-europe%2F%3Flang%3Dig- (Pịgharịa gaa na ala a obere ịhụ Embed Usoro)
europetravel longtrainjourneys trainjourney Tranride ụgbọ okporo ígwè njem Atụmatụ travelfrance travelgermany travelitaly unesco